Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka oo soo dhoweeyay ansixinta sharciga doorashooyinka – Kalfadhi
Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka oo soo dhoweeyay ansixinta sharciga doorashooyinka
March 23, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa soo dhoweeyay ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa,wuxuuna guddiga ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah oo horay loo qaaday.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bishii February ee sannadkan saxiixay sharciga doorashooyinka kadib markii uu soo maray labada aqal ee baarlamanka.
Madaxweynaha ayaa sharcigan ku hor saxiixay xildhibaanada oo ka qeyb-galay munaasabad lagu soo xiray kal-fadhigga baarlamanka oo Muqdisho lagu qabtay.
Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa ka codsaday goleyaasha sharci dejinta iney dedejiyaan meelmarinta dib-u-eegista sharciga Xisbiyada oo hadda horyaala Golaha Shacabka si xisbiyada ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh iney ka qeyb galaan doorashada 2020/21.
Dhinaca kale, guddiga waxaa uu soo dhoweeyay Guddiga isku dhafka ah ee heer Baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarrada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqan gelinta sharciga doorashooyinka oo ay kamid yihiin.
Astaynta deegaan doorashooyinka kuraasta Baarlamaanka, xuquuqda doorasho ee Gobolka Banaadir, ilaalinta qoondaha haweenka iyo deegaan doorashada xildhibaannada Gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Guddiga qaban qaabada Xaflada Caleema saarka oo la kulmay Xaaf